Nei Big Data yakakosha pakutenga kweVatengi? - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Big Data, Big Data Analytics, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Nei Big Data yakakosha pakutenga kweVatengi?
Mabhizinesi eese saizi uye nhanho anodyara mari yakawanda uye nguva yekudhonza kune vatengi. Mari yekuwana mutengi nyowani inowanzo shanu zvakapetwa kupfuura zvazviri kuvabata. Imwe yedzakawanda nzira dzekutsvaga vatengi vatsva ndeyekutenga runyorwa rwemazita uye kutanga kusimudzira kune wese munhu aripo. Maitiro ekusimudzira anogona kunge ari ekutanga uye akadhura meseji, akakurisa mapepa, mafoni kana musanganiswa weavo nevamwe.
Kunzwisisa kuti ndeipi yako yaungatarisira kuve nepakati nepakati mukana wekushandura kuita mutengi chinhu chakakosha kuzadzisa zvekutengesa uye kunyoresa zvinangwa. Ino ndiyo nzvimbo yekufungidzira huchenjeri uye data hombe rinowana chakakosha.
Big Data Inobatsira Sei?
As bhizinesi analytics iri kuramba ichiwedzera kuve yakakosha kuti iwane ruzivo mukati mevatengi uye mapatani, vashambadziri vanofanirwa zvino kutarisa zvakanyanya kuti sei data science inogona kushandiswa zvakakwana kutenga chitsva kwevatengi. Iko kuwanikwa kwedziva rakakura re data rekuongorora uye kunyatsoongorora gungano remuchina kuti riongorore uye kuwana kufambira mberi mune iri dziva reruzivo rakavhura imwe tarisiro yemukana wekutyaira vatengi kutsvaga kwekuita sekuenderana nemaonero akaunganidzwa kubva guru Dhata analytics.
Chaizvoizvo, dhizaini-inotungamirwa nzira yekupa ndeyekubvisa zvakavanzika kubva munzira yako yekutengesa uye kuisimudza nemaonero ane musoro uye nitty-gritty mumapurogiramu evatengi uye nehupenyu hwavo.
Uyewo Verenga: 5 Nzira: AI, ML uye Big Dhata inogona kusimudzira ruzivo rwevatengi
Nei Big Data ichinyanya kukosha kumanikidza vatengi kutenga?
Big data algorithm inogona kutsigira bhizinesi kuita pfungwa yekuvhiringidzika. Inogona kutsvagirisa pamusoro pesosi dzese dhata uye kupinza ese akasiyana mapoinzi e data kuti isarure mukwikwidzi akakodzera panguva yakakodzera. Inoenderera ichipa yakadzika mamiriro ayo anodikanwa kuti anyatso kuendesa mberi kuita kwevatengesi timu.
Kungo taura, kunongedza mukwikwidzi wemhando yepamusoro kunokosha, asi kuita kuti mutengesi akwanise, vanoda pfungwa yekutenga zvisati zvaitika, hukama hwevatengi, uye zvakasiyana zvinhu: zvese izvo zvinogona kuwanikwa nekuongorora iyo data.
Uyewo Verenga: Zvikonzero gumi nei Big Data Kunzwisisa kuri kudiwa kweawa
4 Nzira Huru Dhata Inogona Kubatsira Bhizinesi Rako
1. Chinja Dhata kuita Engagement
Dhata analytics inopa masangano mukana wekushandisa iyo data kukanganisa kwavo kukuru kunetseka. Nokubatanidza data kuita, makambani anogona kufungidzira zviitiko zvenguva yemberi, kunzwisisa maitiro evatengi, uye kuwedzera kutsva kwekuvaka kubatana kunobatsira.
Ziva zvaunotarisira zvinoreva kuti uzive vatengi vako. Pakupera kwezuva, iwe unofanirwa kuve shamwari yepedyo yevatengi vako.
Uyewo Verenga: 6 Big Data Models kutsanangura zvine simba zvimiro
2. Kuwedzera Revenue
Maererano neimwe fungidziro naGartner yemasangano, dzakatenderedza 80% yemari yemberi inotangira kubva kune chete 20% yevatengi varipo. Sei zvingave zvakadaro mamiriro?
Sezvo vatengi varipo vari nyore kupaka kune. Chokwadi chinotaurirwa, mukana wekuchinja pamusoro pemutengi wazvino kuti utenge zvakare i60-70% nepo mukana wekuchinja pamusoro pechimwe chinangwa kutenga ingori 5-20%.
Nekuisa midziyo pakusimudzira kuchengetedza kwevatengi, sangano rako rinogona kuburitsa mari inoshamisa inopesana nekungotarisa mukusimudzira kutenga. Kuwanda kwavatengi kwaunogona kubata, mari yakawanda yaunofanira kushandisa kuwana vatengi vatsva.
Uyewo verenga: 5 Nzira dzaunogona kushandisa Big Dhata yemutengo optimization
3. Kuedza Nzira dzeKushambadzira
Ruzivo harugone chete kukugonesa kusiyanisa vanhu avo vari munzira yekutsvaga. zvinogona zvakare kukugonesa kuyera nzira dzaunoshandisa kubata vangangove vatengi kuburikidza nerwendo rwevatengi.
Kuongorora kweA / B kunogona kushandiswa kusarudza kukwana kwezvose zvine chekuita nevatengi kuwana. Kubva kurwira email mushandirapamwe kopi nekuchinja iyo nzvimbo yako yekufona kuti utore chiito bhatani. Iyi bvunzo ichapa simba kuboka rako kuti riwane nzira dzekuchengetedza vatengi kupinda mukati kusvika pozoita chibvumirano.
Vanhu vamwe nevamwe vanoshandisa mapuratifomu edhijitari kune boka rezvinangwa. Ita nhanho nekuita imwe yevatengi chimiro uye kuronga yakasarudzika system. Sezvakataurwa pamusoro apa, usazeze kuona iyo yakaongororwa data yekugadzira nzira dzekutengesa kuti uwane vatengi vasingafungidzirwe.
Uyewo Verenga: 5 Kubatsirwa uye Kukwikwidzana Kubatsira kweBig Data muBusiness
4. Zviratidzo zveChinangwa
Chinangwa chepakati chevashambadzi ndechekutsvaga vavariro yemutengi - chinangwa chiri chekuti sei munhu achizotenga chinhu kana sevhisi izvozvi kana kuti gare gare. Mukutsvaga kwekutsvaga, iye / iye anowana nezve zvinotarisirwa nemutengi kuburikidza nemazwi ake akakosha pakutsvaga kweinternet.
Tsvaga data rakabatwa pese pese pamabhizimusi epamhepo mapuratifomu, ongororo yechigadzirwa, webhusaiti yekuenzanisa mutengo ndechimwe chezviratidzo zvakavakirwa zvakanyanya uye hotspot yakanakisa yekutenga kutsva kwevatengi Kungoshandisa huwandu uye webhusaiti ruzivo rwekuchengetedza hazvingakupe zvaunoda iwe.
Dhata hombe rinoziva kana mumwe mutengi achitora chikamu mune izvi zviitwa, zvichiratidza kuti vangangoshanduke kuve mutengi anobhadhara aine chaiyo yekushambadzira drive. Dhata analytics inogona zvakare kushandiswa kufanotaura zvinodiwa mune ramangwana, zvichikugonesa kusundira variko vatengi panguva yakakodzera kukurudzira zvimwe zvekuwanikwa. Kutarisa kune akakodzera munhu panguva yakafanira kazhinji ndiyo nzira yekubudirira kwekutengesa.
Uyewo Verenga: 21 Big Data Statistics uye Kufungidzira nezveramangwana reBig Data
Pane huwandu hwakawanda hwe data padhuze nepamhepo rwendo rwevatengi, kubva kune mutengi anoisa mari nguva yavo kuenda kupi uye pavanodzvanya, kune nhamba dzipi dzekubata dzinotora shanduko mukutengesa, ichiita kuti isanyanya kudhara kupfuura nakare kose kushandisa data kunanga uye kubata ako tarisiro.
Zvakare zvakare, iyo inofungidzirwa nyaya yakatenderedza ruzivo rwepamhepo ndeyekuti haina kungovhurika kune yakafanana nhanho uye inoramba yakanyanyisa kuoma kuongorora nekutevera. Muchokwadi, urwu ruzivo rwuripo muhuwandu hwakawanda, zvisinei, iko kuunganidza uye kuongorora shanduko zvakanyanya nepakati.
Nekudaro, iyo data sainzi rinovhura musuwo kune zvakawanda zvingangoitika mhedzisiro mukubata neruzivo rwevatengi. Inopa kushambadza uye nyanzvi dzekutengesa nzira yekuita ruzha, mhedzisiro inofambiswa nedatha munzira yakanakisa yekushandisa zviwanikwa uye kukwezva vateereri nevatengi munzira yakanakisa - kudzima kuvimba kune kwakanyanya kufungidzira uye dzidziso seye gwara revamwe purojekiti sarudzo dzakakomba.
Une chirongwa chakakomberedza data? Wobva watambanudzira kwatiri kubvunza.
Cloud computing inobatsira kuchengeta uye kuongorora huwandu hwakawanda hwe data pasekondi, kuitira kuti makambani akwanise kuwana zvakanyanya kubva ...
Sustainable Development Goals (SDGs) epasi rose akagovaniswa nekuda kwehurombo, kudzikisira kusaenzana, uye kuchengetedza ...